I-Bolt B80, i-SSD yangaphandle, enamanzi kwaye intle | Iindaba zeGajethi
Kungenzeka ukuba xa ufunda umxholo wale posi, into yokuqala ocinga ukuba yayiyeyona nto ifike engqondweni: «A ukuntywila kwidiski yangaphandle? Yantoni? Ngaba siza kudlala kunye nekhompyuter echibini? Sele ikhona le nto besiyiswele! ». Nangona kunjalo, inyani kukuba ngaphezulu komsebenzisi omnye "onezandla zebhotela" baya kusivuyela isicelo esenziwe nguSilicon Power.
Inkampani yeSilicon Power ibhengeze idrive yayo yokuqala ye-SSD: entsha idiski emile idiski, ukuxabisa ukungafuneki, okubonelela nge ukumelana nothuli namanzi Kuqinisekiswe i-IP68. Ilungele abo bathanda ukusela ikofu, iziselo ezihlwahlwazayo kunye nolunye ulwelo olunobungozi ngelixa ufunda okanye usebenza.
IBolst B80, isixhobo esincedayo nesinganyangekiyo
I-Bolt B80 yangaphandle ye-SSD iza kuthi ngaphakathi iindlela ezintathu zokugcina (I-120GB, i-240GB kunye ne-480GB) kwaye yenziwe nge-aluminium. Iintetho a ubukhulu becompact, isetyhula kunye neflethi, isenza kube lula ukuphatha nantoni na epokothweni. Ngapha koko, kwi-11,9mm nje ubukhulu kwaye inobunzima nje obungama-53 grams, iSilicon Power ithi i-B80 yile I-SSD ephathekayo encinci emarikeni, ngokungathandabuzekiyo kunokwenzeka ukubulela kwiidiski zikarhulumente kuphela kwaye ngaphambili, i-HDD okanye ii-mechanical discs, zithintelwe.
I-B80 inonxibelelwano lwe-USB 3.1 olusebenzisa ngokusebenzisa Isinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB, kwaye ihanjiswa nge-USB-C ukuya kwi-USB-Intambo ukuze isetyenziswe nangasiphi na isixhobo esivela kwi-USB 2.0.
Ngokwesantya sokusebenza, iBolt B80 ibonelela imodareyitha yesantya sokudlulisa ifayile eyi-450MB / s ukuya kwi-500MB / s ukufunda nokubhala, okubeka ngasemva ekukhetheni njengee-SSDs eziphathwayo zeSamsung.
Okwangoku, ixabiso alikaziwa nangoku izakuba yintoni lento I-Bolt B80 nguSilicon Power, ke kuya kufuneka silinde ukuze sikwazi ukusebenzisa le nto izakubonakala intle kwidesika yethu kunye nezinye izixhobo zethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » I-Bolt B80, i-SSD yangaphandle, enamanzi kwaye intle